विराटनगर । विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । सोमबार बिहानमात्र अस्पताल भर्ना भएका ७७ वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले दिएको जानकारी अनुसार उनको दिउँसो सवा तीन बजे मृत्यु भएको हो । उनमा ज्वरो, छाती दुख्ने र स्वासप्रस्वासको समस्या रहेको डा. दासको भनाई छ ।
वृद्धको मृत्यु भएपछि कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब झिकिएको थियो । त्यसपछि आएको पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको हो ।
हाल मृतकको शवको व्यवस्थापनको लागि सेनाको टोलीलाई खबर गरिएको छ।